Teny fanolorana - FJKM Amparibe Famonjena
« Eny tokoa, fahasoavana sy famindram-po no hanaraka ahy amin'ny andro rehetra hiainako, dia hitœtra ao an-tranon'i Jehovah andro lava aho. » (Salamo 23:6)
Ry mpianakavin’ny finoana mpitsidika ny Tranonkala,
Mahatsapa ny fahafenoan’ny fahasoavan’Andriamanitra isika amin’ny nitondrany ny fiainantsika nandritra iny taona lasa iny ary ny ahatratrarantsika izao taona vaovao izao. Heniky ny hafaliana isika mifampiarahaba ary ho anay manokana dia feno izany hafaliana izany miarahaba anareo mpamaky ny Gazety Taratry ny Famonjena sy mpitsidika ny Tranonkala tafahoana indray eto amin’ity sehatra ity ary hiaraka hamakivaky izao taona vaovao izao. Mirary indrindra ny fahasovan’ny Tompo hirotsaka aminareo mandrakariva ka ho feno ny fitahiany ianareo amin’ny androm-piainanareo rehetra.
Hanafy hery anareo hatrany anie Izy sy hivimbina anareo amin’izay fikasana tsara rehetra ho sahaninareo mandritra izao taona vaovao izao. Ny faniriana maminay indrindra koa dia ny tsy hahadiso anjara anareo amin’ny famakiana ny Gazety sy fanarahana ny Tranonkala hampitoetra sy hampitombo ny finoanareo amin’ny alalan’ny lahatsoratra havoakany.
Mbola hitohy ny fanandratana ny Teny fanevan’ny Fjkm hoe « Koa aza menatra ny ho vavolombelon’ny Tompontsika » (2Tim 1:8a) ka tsy hitsahatra ny hijoro ho vavolombelona ary hampamirapiratra ny voninahitr’Andriamanitra isika eo anatrehan’izao tontolo izao. Izao gazetintsika izao dia hitohy amin’izany andraikitra sarobidy izany.
Ho eo ambanin’ny fahasoavan’Andriamanitra hatrany anie ianareo.
RAJAOFETRA Seta – Filohan’ny Gazety Taratry ny Famonjena sy ny Tranonkala.